GTMSMART Machinery Co., Ltd.ibhizimusi repamusoro-soro rinobatanidza R&D, kugadzira, kutengesa uye sevhisi. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisiraOtomatiki Thermoforming Machine uye Plastiki Cup Thermoforming Machine, Plastic Vacuum Kugadzira Machine, pepa mukombe muchina, pepa mbiya kugadzira muchina uye pepa ndiro kugadzira muchina ect.
PLC Automatic PVC Plastic Vacuum...
Thermoplastic Vacuum Kugadzira Muchina Tsanangudzo Kugadzira Kugadzira, inozivikanwawo se thermoforming, vacuum pressure yekugadzira kana vacuum molding, inzira inoitisa pepa rezvinhu zvinopisa zvepurasitiki ...
Yakazara Servo Plastic Cup Kugadzira Ma...
Kapu yekugadzira muchina Kushandisa Muchina wekugadzira kapu ndeye Kunyanya kugadzirwa kwemidziyo yepurasitiki yakasiyana (jelly makapu, makapu ekunwa, midziyo yepasuru, nezvimwewo) ine thermoplastic sheets, se...
Servo inotambanudza inotora hydraulic system uye yemagetsi tekinoroji kutonga. Muchina wemutengo wepamusoro wechiyero wakagadzirwa zvichienderana nezvinodiwa nemusika wevatengi. Muchina wese unodzorwa...
Otomatiki Vacuum Kugadzira Machine...
Kushandisa Uyu Vacuum Forming Machine inonyanya kushandiswa kugadzira matireyi embeu dzekurima, marudzi ese echikafu uye maturusi mapakeji.
Ruva Pot Kugadzira Muchina Chishandiso Uyu Thermoforming Machine Kunyanya kugadzirwa kweakasiyana midziyo yepurasitiki ine maburi (hari dzemaruva, midziyo yemichero, mavharo ane gomba, pasuru mudziyo...
Automatic Plastic Flower Pot Mak...
Automatic Cup Lid Thermoforming ...
Cup Lid Thermoforming Machine inotora Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) uye yakasanganiswa otomatiki yekudzora tekinoroji, wobva waita dhizaini yechizvarwa chitsva chezvigadzirwa. ...
1234 Zvinotevera > >> Peji 1/4